トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Inyanga maphakathi no-maphakathi nawo-pachinko emakhazeni kwesici (inkathi yokutakula noma evulekile-ukuphila)
※ ukuhlala isikhathi eside njengoba umkhuba yonke umkhakha labo
pachinko Izintandokazi Sicela ubheke ukuthi, bangase babe nakho abantu obaziyo, ukuqhudelana sasemakhazeni pachinko iyona maphakathi lwenyanga Kunconywa kakhulu . Ngo wamakhaza pachinko, kodwa awukwazi into umcimbi wamanje, uma ufaniswe umcimbi, kumele kube khona izitolo eziningi ukuthi udaba wenkokhelo ezinkulu, ezifana umcimbi uphawu. Ngo
, kuyoba kungani isikhathi ukukhipha imali enjalo, ukukhuluma noma ngabe ukuletha maphakathi no, ehilelekile uhlelo abaningi ibhizinisi. Ibhizinisi uhlelo e sasemakhazeni pachinko okungukuthi, evamile nail izinguquko nezilungiselelo ngenyanga yokuqala, sizobe ukuqala. Ngalesi sikhathi, ngisho noma wenziwa phakathi kancane, kugcina imali ngokwezinga ukuthi ungafunda kusilela.
uma, njengoba nje futhi aphume kusilela, futhi uyaphuma isikhathi esanele ukuze uthole kabusha ungene ngesiwombe sesibili uma phakathi. Ngakho, njengoba ohlangothini pachinko emakhazeni, umdlalo, ezifana kokukhipha wenkokhelo esikhulu anonya ukuthi ibhizinisi engcono kwakulula ukuba phakathi. Ngo, yilokho okuphuma ngokwezinga langempela ibhizinisi, kodwa futhi ekuqaleni kwenyanga kuye ingxenye, uma kuzuza target ngenyanga yokuqala, wena khipha njalo. Njengoba
usuku nje ngoba akuyona ukuthi wonke ithebula ezifana ukulungiswa daba, lelo phuzu, zama ukubona kangcono ukulungiswa. Nail ukulungiswa ngesikhathi somcimbi, ngokuvamile shintsho luzosuselwa. Ake sithi wena ukusetha ukuze 12,5 mm nail evamile ekuqaleni. Ezitolo ezinjalo, uma kukhona ezimisele ukuzidela, kuze mayelana 13 mm kuyofika evulekile. Ukukhuluma
ijubane ukujikeleza, ijubane ukujikeleza ka umzuzu owodwa, 0. I kuyahlukahluka esisodwa izikhathi 5. Mere ingenye umehluko, kodwa uma kungenjalo kaphendukelanga, ngayinye yingoba akusekelwe wami ongeke eze, kuzohluka kakhulu Kubuka Imininingwane utshalomali imali. Yima okudlula lokhu njengoba umngcele umugqa futhi, ukuba baphume kuyinto ngiqonde ukuthi maphakathi lwenyanga. Khona-ke, maphakathi emhlabeni odlule yomholo wakho, 's isikhathi esizayo futhi aphume eziningi kulabo abacabanga ukuthi ufuna ukunqoba. Uma esitolo usebenzisa isethi
Horukon Yiqiniso, kungase abe isethi imnandi ka Horukon.
pachinko emakhazeni we plan ibhizinisi, futhi iye yaba nesandla izimo ezinkulu esifubeni wonke umuntu onjalo. Futhi enjalo, iningi emehlweni Inhloso phakathi yilapho ufuna futhi khumbula ukuthi akusikho nje umcimbi. Ngosuku umcimbi yenkambo aim amehlo, kodwa ikakhulu uma ngabe umcimbi kwaba eyintothololo ke, ezinsukwini ezimbalwa iyona extra inhloso amehlo.
Isizathu sisobala, ukuze ufuna ukubeka ne isithombe iphumele amakhasimende maqondana nengxenye inyanga yesibili, ngoba kukhona isidingo ukuba lapha. Zendai ngisho njengoba akunakwenzeka, ezifana imodeli billboard, wena ngezipikili amasethingi ezimweni eziningi ezinsukwini ezimbalwa ayilibalanga. Esimeni ngosuku olulandelayo, njll, kanye onobuhle onjalo owawuthandwa, onobuhle ukuthi ngokucindezela Ngenxa okusezingeni eliphezulu ukuthi kungenzeka, ngithi ukuthi okulula kancono inhloso amehlo.
e pachinko eshintsha ngazo bazoya zokuphola ukudlala, Ngale ndlela senza ibhizinisi ucabangele ukulandelana kwamaphuzu ngenyanga. Ukulwa ngokuhlakanipha khona inzuzo yokuthi, ukuthi kubalulekile ukuthi siphakamisela ematfuba ngokuwina. Lokho isithombe ukuze ufuna ukubeka ne, ngoba kukhona isidingo ukuba lapha. Zendai ngisho njengoba akunakwenzeka, ezifana imodeli billboard, wena ngezipikili amasethingi ezimweni eziningi ezinsukwini ezimbalwa ayilibalanga. Esimeni ngosuku olulandelayo, njll, kanye onobuhle onjalo owawuthandwa, onobuhle ukuthi ngokucindezela Ngenxa okusezingeni eliphezulu ukuthi kungenzeka, ngithi ukuthi okulula kancono inhloso amehlo.
e pachinko eshintsha ngazo bazoya zokuphola ukudlala, Ngale ndlela senza ibhizinisi ucabangele ukulandelana kwamaphuzu ngenyanga. Ukulwa ngokuhlakanipha khona inzuzo yokuthi, ukuthi kubalulekile ukuthi siphakamisela ematfuba ngokuwina.